Mogadishu Journal » 2017 » December » 16
Kheyre oo ka hadlay go’aankii Mareykanka uu ku joojiyay dhaqaalihii uu sii jiray militariga Soomaaliya
Mjournal :-Ra’isul Wasaaraha Xukuumada Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ka hadlay sababaha dowladda mareykanka ay u hakisay kaalmadii ay siin jirtay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed isagoo ku tilmaamay in ay ku timid hakinta codsi ka yimid dowlada Soomaaliya. Ra’isul Wasaare...
Jubbaland oo 2-1 uga adkaatay xulka kubadda Cagta Galmudug
Xulka Jubbaland ayaa 2-1 uga badiyay xulka Galmudug kulan ka mid ah tartanka ciyaaraha dowlad goboleedyada oo maanta ka dhacday magaalaa Muqdisho. Ciyaartan oo aad u xiiso badneyd ayna daawashadeeda ka soo qeybgaleen kumanaan ruux ayaa waxaa labada xul ay soo bandhigeen ciyaar...
Mjournal :-Kalanka Maanta MudanayaAsha Golaha Shacabka ay ku yeesheen Xarunta Golaha Shacabka ayaa Waxaa Shir Guddoominayay Guddoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, waxaana kulan soo xaadiray mudanayaal tiradoodu ay gaareyso 173 Mudane. Ajendayaasha...
Mjournal :-Xoghayaha Gaashaandhigga dowladda Maraykanka Jim Mattis ayaa sheegay in uu rajo ka qabo in dowlada Soomaaliya hormariso sidii looga gudbi lahaa in la musuqmaasuqo gaarka ay dowlada Maraykanka siiso ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. “Waan hubaa in xal laga gaari karo...
Saudi-led air strikes have killed 28 Huthi rebels around Yemen’s west coast, medics and security sources close to the insurgents have said, as government forces reported deadly clashes in the south. The security sources said air strikes on Thursday and Friday hit five towns...
Kooxo hubeysan oo ruux ku dilay degmada Huriwaa
Mjournal :-Kooxo hubaysan ayaa xalay waqti dambe waxa ay nin ku dileen xaafada Shanta Geed ee Degmada Hawlwadaag, meel ku dhaw Xarunta Degmada ay ku taallo. Dadka degaanka ayaa sheegay saacada markii ay aheyd 2:30 habeenimo in ninkaan lagu dilay meel ku dhaw masaajidka Shanta...
Kalfadhigii Labaad ee baarlamaanka oo maanta la soo xirayo
Mjournal :–Kalfadhiga labaad ee Golaha Shacabka Somaliya, ayaa maanta oo Sabti ah waxaa lagu wadaa in lagu soo xiro Magaalada Muqdisho, sida ay xaqiijiyeen Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Somaliya. Gudoomiyaha Baarlamaanka Somaliya Maxamed Sheekh Cismaan (Jawaari) ayaa...
Illaa 65 ruux Soomaali oo lagu dilay deegaanka ismaamulka Oromada Itoobiya
Mjournal :-Illaa 65 ruux oo Soomaali ah ayaa lagu dilay deegaano ka tirsan Ismaamulka Oromada Itoobiya, iyadoo uu sii xoogeysanayo rabshadaha iyo isku dhacyada u dhaxeeya Soomaalida iyo Oromada. Tuulada Gadule oo hoos tagta degmada Darulow ee Ismaamulka Oromada ayaa lagu dilay...
Jidadkii ku xirmay dagaallada Gaalkacyo oo dib loo furay
Mjournal :-Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf, Taliyaha Milateriga C/wali Jaamac Gorod iyo Taliyaha Ciidamada Puntland Saciid Dheere ayaa saaka ka bilaabay magaalada Gaalkacyo furitaanka waddooyinkii ku xirmay dagaalada. Ololaha wado furista ayaa ka dhashay Gogol...